သားနဲ့သမီးရှိလျှက်နဲ့ ခုလိုဘ၀ရောက်နေတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ | D Daily News
Home News သားနဲ့သမီးရှိလျှက်နဲ့ ခုလိုဘ၀ရောက်နေတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ
သားနဲ့သမီးရှိလျှက်နဲ့ ခုလိုဘ၀ရောက်နေတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ
သူတို့ ကတော့ အဆင်ပြေ တယ်ပေါ့..ပိုက်ဆံ ရှိတယ် ပေါ့…
အဘိုးက တော့ တောင်းစားနေတာပေါ့ သမီးရယ်’..
အခု အဖိုး ဘာစားပြီးပြီလဲ…
အတော် ပဲ့ အဖိုး.. ဒီမှာ သမီး ထမင်းနဲ့ ဟင်းဝယ်ပေးခဲ့တယ်…..စားလိုက်နော်….
အဘိုး မိုးရွာရင် ဘယ်လိုနေလဲ…. ???
မိုးရွာရင် မအိပ်ရဘူးပေါ့ သမီး…
(မိုးတစ်ညလုံး ရွာတဲ့ နေ့/ည မျိုးဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကွယ်)
သိပ်မကြာခင်မှာ သမီး တို့ ပြန်လာခဲ့မယ် နော်…
အမိုးအကာလေးနဲ့ ဖျာ /ခြင်ထောင် / ခေါင်အုံး/ စောင်နဲ့ လေ လုံမိုးလုံနေလို့ရအောင် လာလုပ်ပေးမယ်နော်…ဒီ ကြားထဲ ဂရုစိုက် နေပါ အဘိုး..
​ေအအေ ဝမ်းသာလိုက်တာ သမီးလေး တို့ရယ်…
သွားရင်း လာရင်း တွေ့လို့ရှိရင်… စိတ်စေတနာ ပါသလောက် ပေးခဲ့ ကျွေးခဲ့ပေးကြပါလို့….မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်ရှင့်….အဲ့ အဘိုးက မဟာစည်ရိပ်သာ မုဒ်ပေါက်ဝမှာ ခိုနေပါတယ်…..
လူငယ် လူရွယ် လူကောင်း တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကျမ တို့တောင် ရှင်သန်ဖို့ ခက်တဲ့ ဒီ ကာလ မှာ ဒီလို သက်ကြီး အဘိုးအဘွားတွေက်ို တက်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြရအောင်နော်…
သားနဲ႔သမီးရွိလွ်က္နဲ႔ ခုလိုဘ၀ေရာက္ေနတာ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ
သူတို႔ ကေတာ့ အဆင္ေျပ တယ္ေပါ့..ပိုက္ဆံ ရွိတယ္ ေပါ့…
အဘိုးက ေတာ့ ေတာင္းစားေနတာေပါ့ သမီးရယ္’..
အခု အဖိုး ဘာစားၿပီးၿပီလဲ…
အေတာ္ ပဲ့ အဖိုး.. ဒီမွာ သမီး ထမင္းနဲ႔ ဟင္းဝယ္ေပးခဲ့တယ္…..စားလိုက္ေနာ္….
အဘိုး မိုး႐ြာရင္ ဘယ္လိုေနလဲ…. ???
မိုး႐ြာရင္ မအိပ္ရဘူးေပါ့ သမီး…
(မိုးတစ္ညလုံး ႐ြာတဲ့ ေန႔/ည မ်ိဳးဆို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ကြယ္)
သိပ္မၾကာခင္မွာ သမီး တို႔ ျပန္လာခဲ့မယ္ ေနာ္…
အမိုးအကာေလးနဲ႔ ဖ်ာ /ျခင္ေထာင္ / ေခါင္အုံး/ ေစာင္နဲ႔ ေလ လုံမိုးလုံေနလို႔ရေအာင္ လာလုပ္ေပးမယ္ေနာ္…ဒီ ၾကားထဲ ဂ႐ုစိုက္ ေနပါ အဘိုး..
​ေအေအ ဝမ္းသာလိုက္တာ သမီးေလး တို႔ရယ္…
သြားရင္း လာရင္း ေတြ႕လို႔ရွိရင္… စိတ္ေစတနာ ပါသေလာက္ ေပးခဲ့ ေကြၽးခဲ့ေပးၾကပါလို႔….ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္ရွင့္….အဲ့ အဘိုးက မဟာစည္ရိပ္သာ မုဒ္ေပါက္ဝမွာ ခိုေနပါတယ္…..
လူငယ္ လူ႐ြယ္ လူေကာင္း ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ က်မ တို႔ေတာင္ ရွင္သန္ဖို႔ ခက္တဲ့ ဒီ ကာလ မွာ ဒီလို သက္ႀကီး အဘိုးအဘြားေတြက္ို တက္ႏိုင္သေလာက္ ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရေအာင္ေနာ္…
Previous articleလူစိတ်မရှိတဲ့ယောကျ် ားကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အ သ တ် ခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး
Next articleလုပ်ရက်ကြတယ်နော် ငါတို့က ဘာများမှားနေလို့လဲ ဝဋ်ကြွေးတွေဆိုလဲ​​ေကျပါတော့